ကီးလော့ဂျာ - 30 April 2009 - Personal site
Myanmar Computer Org Sunday, 11.18.2018, 3:32 PM
Main » 2009 » April » 30 » ကီးလော့ဂျာ
ကီးလော့ဂျာ ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲက ကိုယ်ကွန်ပြူတာမှာ ဘယ်သူဘာတွေ ၀င်နှိပ်သွားလဲဆိုတာက အစ၊ စခရင်ရှော့ အနေနဲ.ကော ၊ ဘာ Password တွေနဲ. ၀င်သွားတာက အဆုံး အကုန်လုံးကို ပြန်ကြည့်လို.ရတယ်ဗျ။ အင်တာနတ်က ရှာပြီးဒေါင်းလော့ဆွဲရင် Full Version မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က ခရပ်ဖိုင်ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီဟာကိုသုံးပြီး သူများ အီးမေးလ် Password တွေတော့မခိုးနဲ.ပေါ့ဗျာ။ နို.မိုဆိုရင်ကို ” ဆော့ဝဲကြောင့် ကျွန်တော်တို. Cyber Cafe မှာ Password အခိုးခံရမှဆိုးလို. ဘယ်သူမှလာမသုံးကြတော့ဘူး” Cyber Cafe တွေက ကျွန်တော်ကိုလာပြောနေကြပါဦးမယ်ဗျာ။
ကီးလော့ဂျာ ကို Download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ password လေးကိုပေးပြီး run လိုက်ပါ။ပြီးတာနဲ့ Shift+h ဆိုရင် hide ထားတာပါ။ Shift+s ဆိုရင် ပြန်ဖော်ထားတာပါ။ hide ထားရင် run လို့run ထားမှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျ…
Views: 656 | Added by: yetwayhtet | Rating: 0.0/0 | - Rate - Excellent Good Not bad Bad Awful